Teny filamatra : ليبيا، ليبيا ، ليبيا
Libia, Libia, Libia'
Teny ofisialy arabo klasika
Tanàna ngeza indrindra Tripoli
- Rano (%) faha 17
- hakitroka faha 104
6 173 579 mpo.
Anaran'ny mponina Libianina
Sandam-bola Dinar libianina (LYD)
Hiram-pirenena Allahu Akbar
I Libia dia firenena any Afrika Avaratra, izay manana morontsiraka ao amin’ ny Ranomasina Mediteranea, manana velaran-tany mirefy 1 757 000 km². Mpikambana ao amin' ny liga arabo i Libia. Izy no firenena be velarana indrindra aty Afrika. Ny tany efitr’ i Libia dia mandrakotra ny 99 %n’ ny tanin’ i Libia. Ny tany sisa azo volena sy misy zavamaniry hohanin’ ny biby fiompy dia ny ampahany manaraka ny morontsiraka (faritra Tripôlitàna sy Kirenaîka). Ity firenena ity dia voafaritry ny ranomasina Mediteranea any avaratra, i Aljeria (982 km) sy i Tonizia (459 km) any andrefana, i Nizera (354 km) sy i Tsady (1 055 km) any atsimo ary i Sodàna (383 km) sy i Ejipta (1 115 km) any atsinanana.
Ny anarana hoe Libia dia avy amin' ny anarana foko berbera Libu, nanome ny anarana grika Libiyè.
Ny ankamaroan’ ny mponina ao Libia dia Arabo sady Miozolmana. Ny 2/3n’ ny Libiana dia monina amin’ ireo faritra a-morontsiraka fa ny tany efitra kosa dia onenan’ ireo foko tsy dia miorim-ponenana loatra.
Talohan’ ny fahitana voalohany ny solitany tamin’ ny taona 1958 dia niankina tamin’ ny fambolena sy ny fiompiana ny toekaren' i Libia. Niova izany toe-javatra izany taorian’ ny fahafantarana ny fisian’ ny tahirin-tsolitany voajanahary: miankina amin’ ny fandiovan-tsolitany sy ny taozava-baventy momba ny solitany ny toekaren’ i Libia.
Ny fiteny arabo no fiteny ôfisialin’ i Libia.
Lahatsoratra antsipirihany : Tantaran'i Libia.
sokajy Libia ao amin'ny dmoz
((fr)) « Rapport du Parlement européen sur les droits de l'homme en Libye Archived Martsa 26, 2006 at the Wayback Machine » (tovana PDF, 32 Ko)
((fr)) « Rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en Libye »
((fr)) « Situation linguistique de la Libye »
((en)) Underground "Fossil Water" Running Out Brian Handwerk, National Geographic, May 6, 2010.
((en)) Libya turns on the Great Man-Made River Marcia Merry, Printed in the Executive Intelligence Review, September 1991.
((fr)) « Libye entre rêve et réalité »
((fr)) « Sooglibya Agence immobilière libyenne Archived Septambra 14, 2019 at the Wayback Machine »
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Libia&oldid=1040804"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:14
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:14 ity pejy ity.